Dhul Gariir Xoogan Oo Ku Dhuftay Konfurta Dalka Iiraan. – Calamada.com
Dhul Gariir Xoogan Oo Ku Dhuftay Konfurta Dalka Iiraan.
calamada April 19, 2018 1 min read
Wararka ka imaanaya dalka Iiran waxey sheegayaan in saaka aroortii dhul gariir xoogan uu ku dhuftay gobalka Bush-her ee dhaca Konfurta dalka Iiran,waxaana gobalka uu dhul gariirkan ka dhacay ku taala Warshad sameysa Tamarta Lugliyeerka.
Dhul garirkan ayuu cabirkiisu yahay 5.9 marka laga hadlayo Rikhtarka lagu cabiro dhul gariiryada,waana dhul gariir aad u xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan gobalkaasi.
Warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in dhul gariirkan uu ka dhacay dhulka hoostiisa 18-KM waxaana halka uu dhul gariirkan ka dhacay 3-km u jirtaa magaalada Kaki ee gobalka Bush-her,walina dowlada Shiicada Iiraan ma aysan shaacin inta ay la egtahay khasaaraha nafeet iyo midka hantiyadeed ee uu geystay dhul gariirkan ku dhuftay Konfurta dalkaasi.
Dalka Iiraan ayaa ka mid ah wadamada ugu badan caalamka ee uu kusoo laablaabta dhul gariirka’iyadoona dhul gariiryo dhowr jeer dalkaasi ka dhacay ay sababeen dhimashada Kumanaan ruux iyo burbur hantiyadeed.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 03-08-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 4-08-1439 Hijri.